I-Semalt inikeza imibono on Indlela Yokwenza Umkhankaso Osebenzayo Wemidlalo Yezenhlalo Ehamba Nezifo Eziphuthumayo
Ukuhlela umkhankaso wezokuxhumana womphakathi kuyinkqubo yenqubo edinga ukukwenziwaizinga eliphezulu lokuqala kanye nemisha. Inhloso eyinhloko yemikhankaso yezokuxhumana yomphakathi ukwakha ukufaneleka, ukwethemba, nokuthuthukisaumqondo wokuba ngamakhasimende. Kulo nyaka, abathengisi bezokuxhumana bezenhlalo baye basebenzisa ama-seasonal schemes ukuze babasize bahambisane namakhasimendefuthi kufinyelele imigomo yebhizinisi nezinhloso.
Njengomthengisi womphakathi wezokuxhumana, udinga ukuveza imithombo yezokuxhumana engacabangekiimibono nobuciko obungenakuqondakalayo ukuheha isibalo esihle sababukeli kumkhankaso wakho, futhi ngokuyisisekelo ukuguqula ukuba abeabathenga abathengi namakhasimende athembekile - aero tank mega.
Uchwepheshe we Semalt ,Imisebenzi yeDividenti, u-Oliver King unikeza uhlu lwemibono engaqondakali eyokusiza ukuba uzuze izinga eliphezulu lokuguqulwa kwezokuthengisa.
Yakha ividiyo enhle
Ekukhangiseni kwezokuxhumana komphakathi, amavidiyo abe yiyona ndlela esebenzisa kakhuluimikhankaso yezokuxhumana. Amavidiyo adlala indima ebalulekile njengoba ayabelana kalula futhi afinyelela kubasebenzisi abaningi. Cabanga kufaka phakathi amavidiyo afundisayoimikhankaso yakho yemidiya yomphakathi. Futhi, bagcwalise ngemvelo yokuxhumana ukuze abasebenzisi bakho babelane ngokuqukethwe kalula. Ngokwesibonelo, KateI-spade yaba nempumelelo enkulu ngemuva kokuletha umkhankaso we-video ohambisana no-Anna Kendrick. Lo mkhankaso wagijima.
Yakha umxhwele wemicabango
Eminyakeni embalwa eyedlule, uBurberry wathinta izihloko ngemuva kokudala i-ephumelelayoumkhankaso wezokuxhumana wezokuxhumana "Kusuka eLondon noThando". Ungakha ividiyo nge-tweets ngokomzwelo kanye nezikhonkwane bese ubona umkhankaso wakho uhamba ngegciwane.
Umklomelo abalandeli bakho
Ukwakha ukuvezwa kwemikhiqizo ebanzi nokubandakanya abasebenzisi kuyimfuneko ebalulekileuma kuziwa ekukhangiseni kwezokuxhumana. Ungakhuthaza abalandeli bakho kumapulatifomu wezokuxhumana zenhlalo ukuthi athande umkhiqizo wakho futhi usebenziseukubandakanyeka. Isitayela somkhosi kagesi yisibonelo somkhankaso wezokuxhumana womphakathi wonyaka owasungulwa yi-Urban Decay futhi unayoimpumelelo enkulu. Ungabanikeza abalandeli bakho ngamakhuphoni amahle namathikithi..
I-Giveaways icela abasebenzisi ukuba baqonde ngokujulile umkhiqizo wakho futhi ngokubuyisela,yakha ukuthembela kumkhiqizo wakho. Cabanga ukubuza abalandeli bakho umbuzo olula, futhi bazoqhubeka bebeka amazwana ngokunikela kwakho usuku lonke.
Ukukhuthaza imbangela yomphakathi
Ukukhuthaza imbangela yenhlalo yindlela eyodwa yokubandakanyeka kwabasebenzisi bakhouvumela amakhasimende akho ukuthi ahlanganyele nomkhiqizo wakho. Ngokuhamba kwesikhathi, ungagcina ukuxhasa ngezimali inkambo yokusiza, lapho wonke amaklayentiukujoyina lo mhlangano uthola ithuba lokuzibandakanya ngqo nomkhiqizo wakho. Ukumaketha kwezokuxhumana kufanele kube konke okubandakanyafinyelela impumelelo enkulu.
Ukunikeza ukudayiswa okumangalisayo nezaphulelo
Ukunikezwa izaphulelo zonyaka kudonsela amaklayenti kumkhiqizo wakho. Ukufeza okuphezuluisilinganiso sokuguqulwa kumkhankaso wakho wezokuxhumana womphakathi, unikeze izaphulelo ezimangalisayo nokuthengisa ukuze ufinyelele ukubandakanya komsebenzisi omkhulu kunabo bonke. Ngokwesibonelo,sebenzisa amaholide isikhathi sokukhulisa ukuguqulwa emkhankasweni wakho.
Bonisa izimiso ezinhle
Ukwakha ukwethemba uma kuziwa ekumaketheni kwezokuxhumana kwezenhlalo ngeke kugcizelelweokwanele. Ukubonisa izindinganiso ezinhle, ukwabelana ngendlela enhle nokubuyisela emphakathini kudonsela inani elikhulu labasebenzisi kumkhankaso wakho. PhezuluIzinga lokuphikisana likhokha imivuzo. Isibonelo, umkhankaso wezokuxhumana we-TD Bank, i-MakeTodayMatter ithola ukwabelana okungaphezu kwezigidi ezingu-3.5ngemuva kokubonisa ukuthi yikuphi okushiwo okukhulu emphakathini.
Yakha i-giveaways ezintsha
imikhankaso ekhethekile yokunikezela isebenza ukuveza abasebenzisi ngendlela ekhethekile kakhulu. Sebenzisa ngokucacilekanye namathekisthi anxusa ukunikeza abasebenzisi namakhasimende ithuba lokuhlanganyela emkhankasweni wakho wezokuxhumana.
Imikhankaso yokuhola amaholide ezokuvakasha
Sebenzisa amaholide omphakathi ukuze ukhulise ukubandakanya komsebenzisi. AmaHholide amahleisikhathi sokuxhumana okuhle namakhasimende akho nabasebenzisi bakho. Vumela amakhasimende akho ukuthi azibonga kanjani ngokuqhubeka kwaboukuxhumana nokuhlanganyela emkhankasweni wakho.
Imikhankaso yemidiya yezenhlalakahle idlala indima ebalulekile ekwakheni ukwethenjwanokuthembeka phakathi kwabasebenzisi nabathengisi. Ukubonakala nokuchayeka yizinsika ezimbili eziyinhloko lapho imikhankaso yemidiya yomphakathi ikhona khona. Yenza yakhoUmkhankaso wezokuxhumana wezenhlalakahle ufinyelele impumelelo enkulu ngokusebenzisa ukwenza imiqondo ekhonzwe ngenhla futhi ujabulele ukuguqulwa okumangalisayo.